Dmitry Zimin: ukuphila kwakhe
Usomabhizinisi Ezivelele, UMuphi futhi usosayensi odumile osekela Dmitry Zimin bangaba isibonelo sendlela umuntu uyakwazi ukudala ukuphila kwabo ngokuhambisana kwezifiso zawo kanye nezifiso. Wabonisa ukuthi umgomo akukephuzi kakhulu ukuya, into esemqoka - ukuthola ukusetshenziswa okuhle amabutho azo.
Dmitriya Zimina umndeni inomlando omude nezihloniphekile. okhokho baso babengabapristi ngabameli owaziwa yomthengisi eMoscow umndeni Guchkovs, nakho sivela Old Engakholwa yendwangu umndeni Umnikazi wefemu. Umncintiswano kwaba eningi osomabhizinisi yimpumelelo futhi abathengisi, umphakathi eziningana abavelele izibalo zezombusazwe. On the ingxenye uhlanga Zimin Ubuye ivelaphi evela kubanikazi bako wefektri yendwangu, emkhayeni kwadingeka bona babasekeli babo abaningi. Ibhizinisi ukusekelwa proclivities wayezuze futhi Dmitry Zimin. I ubuzwe kanina - ukuphambuka kusuka egatsheni Russian kuphela. Kodwa Zimin ngokufanele baqhubeka nomsebenzi yokhokho bakhe, hhayi hlaza amagama abadumile.
Lo njiniyela Metrology umndeni oloba elula ngo-1933 umfana wazalwa - Dmitry Zimin. Biography ingane kusukela ekuqaleni sonakala ukuboshwa kayise. Wayengumuntu umsizi Uprofesa Institute. Baumann nenhloko Laboratory of Setekulinganisa, ngo-1935 waboshwa ekuthunjweni awabuyi. Umfana wakhula, yena, nonina, owalwa ukuqinisekisa impilo ehloniphekile indodana yakhe, futhi kamuva Dmitry uzokhumbula ukuthi wakhula umsindo nomshini wokubhala. Yasungulwa ngonyaka ka imvelo evamile eMoscow, kodwa waba nenhlanhla nathishela physics - SM Alexeyev, owakwazi ugqozi mfana umsakazo, baze co-wabhala incwadi "Isikole VHF esiteshini." Lokhu kunqunywa kukhethwa umsebenzi. Ngo-1950, Zimin uya umsakazo ubunjiniyela faculty of Mai.
Ekupheleni Dmitry Zimin inyuvesi iza ukusebenza elinezinkathazo Mai lab futhi iqala uhambo lwayo kwezesayensi. Ngo-1962, isazi abasha ethembisa ababemenyelwe ivaliwe Radio Engineering Institute yase-USSR Academy of Sciences - indawo lapho ngithatha induku oluvelele ngempela kuphela. Ngo-1963, Zimin uvikela mqondo yakhe futhi liye kancane wafunda isihloko - microwave-antenna izinhlelo. Nge ithimba co-abalobi ngo-1965, wathola indondo ophezulu we-Academy of Sciences of the USSR. NJENGOBA Popova. Ngo-1984 waba udokotela wesayensi lobuchwepheshe. Iminyaka 35 Dmitry Zimin labetibambile izikhundla eziphezulu emazingeni ahlukene, futhi wasukuma ukuba umqondisi weSikhungo sokuthuthukiswa zikagesi. Phakathi nokuphila kwakhe, usosayensi ishicilele amaphepha isayensi ezingaphezu kuka-100.
Kodwa isayensi kungaphazamisi ubumfihlo kanye nososayensi. Ukusebenza itoho ngemva kokuthweswa iziqu kuya yemivubukulo, wahlangana Mayey Pavlovnoy, isazi-mlando, ngubani waba ngumkakhe. Umndeni wathola amadodana amabili, uSergei futhi Boris. Zimin nomkakhe uthanda ukwenza ucwaningo zomlando umgwaqo kwesihlahla obhaliwe wohlu lozalo lwemindeni.
Iphuzu elisha inkomba: "VimpelCom"
Esikhathini 90 kwesayensi ekhulwini lama-20 abhekene naso ne nezikhathi ezinzima. Isikhungo sifuna ukuguqulwa kokubika, nenqwaba ezihlukahlukene amabhizinisi amancane. Zimin futhi behileleke imisebenzi eminingana, okungezona zonke zaphumelela. Ngo-1991, isihloko buthola ukuphuthuma sefoni yeselula, futhi umsebenzi project iqala ukubandakanya Dmitry Zimin, omisebenzi yakhe wayehlobene lobuchwepheshe ekusekeleni injongo jikelele ezweni uxhumano. Uba umqalisi iNkampani "Vimpel-Communications". Kusukela kulo mzuzwana iqala esigabeni esisha empilweni Zimin, yena uphokophele inkampani likhula ngokushesha futhi abe umholi emakethe yezokuxhumana mobile. Wakwazi okokuqala emlandweni Russia ukuheha utshalomali enkulu Western sokuthuthukiswa "VimpelCom". Ngo-2008, Zimin iba 167th ohlwini wabantu abacebe waseRussia kwi "Ezezimali" magazini. Ngo-2001, Dmitry Zimin ithola isinqumo elishaqisayo - esephuma phansi njengoba CEO abe ngumengameli zokuhlonipha ka "VimpelCom". Lesi sinqumo sakhe, echaza ukuthi kwase kuyisikhathi sokuba uthole phansi ibhizinisi ngenxa yomphefumulo nomndeni.
Ngemva kokuyeka tebuholi Zimin wasungula "Dynasty" Isikhwama, esiklanyelwe bahlanganyele ekuthuthukiseni isayensi, ukuthuthukiswa kolwazi lokubalulekile imfundo. Umkhaya Accounting Foundation is ukusebenzisa inani elikhulu kwezinhlelo zezenhlalakahle, banyathelisa futhi basakaze omningi izincwadi zemfundo, isekela yesayensi, izikhungo zemfundo, izintatheli, aphikisayo. Empeleni, lokhu kwaba isizathu ukuthi Isikhwama yabizwa ngokuthi "i-ejenti angaphandle" ngo-2015. Kulokhu, umsunguli asithathe ngokwayo okuwukuphela kwekhambi eliphelele kungenzeka zokuqeda "Dynasty." I okukhulunywa ngawo kakhulu umuntu ehlobo 2015 iba Dmitry Zimin. Photo abavikela uvele abezindaba eziningi ngenkuthalo embozwe isinqumo ukuvala Isikhwama. Zimin bekulokhu bangavumelani ngokunamandla amacala, kodwa wayengafuni ukulwa ngamandla umshini. Wezwa ephoxekile, ngoba umndeni wakhe lukhulu kangaka eRussia.
Ngemva kokuvala le "Dynasty" Dmitry Zimin ngenkathi ephethe ukuhlaba ikhefu, kodwa ke wabuyela abahluphekile. Wathi wayengeke aqhubeke ukunikeza umklomelo "lwenkanyiso." Abasebenzi "Dynasty" izimali evulekile "Ukuziphendukela kwemvelo" futhi "trajectory", kodwa azikwazi ukufanisa isikali yesikhwama Zimin. abavikela abathukuthele kwesokunxele Russia, kodwa uhlose ekugcineni ukubuyela basayibambile ezweni lakhe.
Umqondisi Maykl Mann: Biography, izithombe. movie aphezulu
Izinkanyezi amahle kakhulu emhlabeni: yokulinganisela uhlu futhi amaqiniso athakazelisayo
Nazarbaev Aysultan: Biography kanye nempilo yakho
Accu-Chek Active - the glucometer ethandwa kakhulu
Pancake nge inyama nengulube. Recipe pancake nge inyama, amakhowe bese nut ukugxusha
EYekaterinburg Amathempeli: amakheli, izithombe kanye nomlando
Kuyini engcono ukhethe izinkuni chip kubhayela ngoba indlu?
Pancake okumnandi nge amakhowe
Khetha amagama we-chinchillas
Ukudoba clinch (engeyokuqala): isicelo futhi ukunitha imishini
Izilwane zasendaweni yaseBelgorod zibalulwe eNcwadini Elubomvu: incazelo, isithombe